Uqeqesho lweVocab 1
Isigama kwiContact Practice
Ukuzama ukuzilungiselela ukuhlola kwakho okulandelayo? Ingaba ulungelelanisa isigaba seNkcazo ye-GRE, iCandelo lokuFunda eliPhezulu le-SAT, icandelo lokuFunda lomThetho okanye uvavanyo lwakho oluqhelekileyo lokufunda esikolweni, amathuba okulungileyo kufuneka uqonde igama lesizwi okanye ezimbini kumxholo . Ngokuqinisekileyo, uza kufumana imibuzo ejwayelekile malunga nokufumana ingcamango ephambili , ukwahlula injongo yomlobi kunye nokwenza izinto ezintle , kodwa ezo zinokuba zikhohlisayo ngelixa iigama eliqhelekileyo kumxholo ngokuqhelekileyo zilula ukulawula ukuba uzalisekisa ukusetyenziswa kwezwi .
Ngoko, makhe siqhubeke nalo, siya kuthi! Funda inqaku elingezantsi uze uphendule imibuzo ehambelana nayo. Ootitshala, bazive ukhululekile ukuprinta kwaye sebenzisa ii-PDF apha ngezantsi ukuze wenze izicwangciso ezincinane okanye i-vocab njengokuba ubona kufanelekile.
Ukusetyenziswa kweVocab 1 Iphepha lokusebenzela
I-Vocab I-Practice 1 Phendula I-Key
Ukutshintshwa kwi-"Window Window" ngo-Ambrose Bierce.
Ngowe-1830, kuphela iikhilomitha ezimbalwa ukusuka kude nento ngoku isixeko esikhulu saseCincinnati, sibeka ihlathi elikhulu kunye neliphantse. Ummandla wonke wawuhlala ngokukhawuleza ngabantu basempumalanga - imiphefumlo engenasiphelo esingazange ivele ikhuphe imizi engenakuhlala kwintlango kwaye ifikelele kwinqanaba lempumelelo namhlanje namhlanje esiyibiza ngokuba ngabantu, kunokuba, babangelwa yimpembelelo uhlobo, bashiya yonke indawo baza baqhubela phambili ngasentshonalanga, ukuba bahlangabezane nemingcipheko emitsha kunye nokuzimela kwiimzamo zokuphinda bavuseleleke izinto ezincinci abaye balahla ngokuzithandela.
Uninzi lwabo lwaluye lwashiya loo mmandla kwiindawo zokuthutha, kodwa phakathi kwalawo aseleyo kwakungomnye wabo owayefike kuqala. Wahlala yedwa kwindlu yezigodo ezijikelezwe ngamacala onke ngehlathi elikhulu, elinobuhlungu kunye noxolo lwabonakala liyingxenye, kuba akukho mntu wayedla ngokumncoma okanye akhulume igama elingenamsebenzi.
Izinto zakhe ezilula zifunwa ngokuthengiswa okanye ukukhonkxa kwezikhumba zezilwanyana zasendle kwidolophu yomlambo, kuba akukho nto ayikhulisa ngayo emhlabeni, ukuba, ukuba kuyimfuneko, wayenokuthi wayenalo ilungelo lokungenakunqandwa. Kwakukho ubungqina "bokuphucula" - iihektare ezimbalwa zomhlaba ngokukhawuleza malunga neendlu sele zihlanjululwe imithi yayo, iziqu ezonakalisiweyo ezazisisigxina ngokufihla ukukhula okutsha okuye kwaxhatshazwa ukulungisa ukutshabalalisa okwenziwa yinto . Kubonakala ukuba inzondelelo yenzalo yezolimo yayitshise ngomlilo ongapheliyo, iphelelwa ngumlotha.
Indlu encinane yelogi, kunye nengqayi yayo yamatye, uphahla lwama-clapboards alwaxhasayo kwaye lunzima ngokuphamla izibonda kunye "nokuchithwa" kwodongwe, kwakunomnyango owodwa kwaye, ngokubhekiselele ngqo, ifestile. Kodwa, ekugqibeleni, wayekhwele - akukho mntu unokukhumbula ixesha apho kwakungekho. Kwaye akukho mntu wayesazi isizathu sokuba ivaliwe; ngokuqinisekileyo kungekhona ngenxa yokungafuni umhlali kunye nokukhanya, kuba kwezo zihlandlo ezingaqhelekanga xa umzingeli wayesedlulisa ukuba yedwa i-recluse yayibonakala ilanga emnyango wakhe ukuba izulu linike ilanga ngenxa yesidingo. Ndiyathanda ukuba kukho abantu abambalwa abaphila namhlanje abaye baqonda imfihlelo yeso festile, kodwa mna ndiyodwa, njengokuba uya kubona.
Igama lomntu lathiwa yi-Murlock. Wayeneminyaka engama-70 ubudala ubudala, ngokwenene malunga namahlanu. Into engaphandle kweminyaka yayinesandla ekugugeni kwakhe. Inwele zakhe kunye neendalane ezide, ezigcwele iindevu zazimhlophe, i-gray grey, ingabonakali amehlo agqabileyo, ubuso bakhe bubunqamle kunye nemibonakalo ebonakala ibe yinkqubo ye-intersecting. Ngomfanekiso wayemude kwaye ekhuselekileyo, kunye nesigxina samagxa - umthwalo wemithwalo. Andizange ndimbone; le nkcukacha endiyifunayo kumkhulu-makhulu, endifumana nayo ibali lomntu xa ndiyinkwenkwe. Wayeyamazi xa ehlala kufuphi ngaloo mini.
Ngenye imini uMurlock wafunyanwa kwikhishini lakhe, efile. Kwakungelona ixesha kunye nendawo yee-coroners kunye namaphephandaba, kwaye ndicinga ukuba kuvunyelwene ukuba ufile ngenxa yezizathu zendalo okanye ndimele ndixelelwe, kwaye ndifanele ndiyikhumbule. Ndiyazi kuphela ukuba kunye nokuba yintoni umqondo wokuqina kwezinto umzimba wangcwatyelwa kufuphi nekhabini, ecaleni kwengcwaba yomfazi wakhe, owayemlandele iminyaka emininzi kangangokuthi isithethe sendawo sasigcina singabonakali.
Njengoko isetyenziswe kumhlathi omnye, igama elithi indigence lithetha phantse ...
Njengoko isetyenziswe ngasekupheleni komhlathi omnye, igama lihlupheke kakhulu kwiindlela ...
C. i yalelwe
Njengoko isetyenziswe kwimihlathi emibini, igama lihamba ngeendlela ezininzi ...
Njengoko isetyenziswe kwisigatshana sesithathu, igama elingenakucingisisa kakhulu lithetha ...
Njengoko isetyenziswe kumhlathi wesihlanu, igama ligcinwe kakhulu malunga neendlela ...
Ukuba yi-Munv Edvard: Impembelelo, ukukhathazeka kunye neengcali
Yiyiphi i-Aagle ebini kwiGalofu?
Imithandazo Yobutsha Bokuzibulala
Funda ukudlala iinqwelo zeSahlulo seGalofu iNdlela echanekileyo
Ngaba Lo NguMfazi Odelele Kwihlabathi?
Intlekele yaseBrooklyn eBridge
I-Carleton College GPA, iSAT kunye ne-ACT Data
Ukuzivocavoca ekusebenziseni iifomu ezichanekileyo zesiLwimi zesiLwimi
I-Top 10 yePop Music Umculo i-Divas yexesha lonke
Uluhlu lwamaQumrhu abonakaliswe yiSuba Ukunyuka
Ziziphi iimbala ekufuneka ndidibanise ukuPenda kwiHarse yeChestnut?
Lo Mdala wamaGrike wama-Arsonist Wenza iMangaliso Yehlabathi ngomlilo
Umsebenzi we-Quadratic - Umsebenzi womzali kunye neeShicilelo